(src)="1.1"> Ny Balkana : “ An ’ iza ity hira ity ? ”
(src)="1.2"> Namoaka ny tahirin-kevitra fanadihadiana “ An ’ iza ity hira ity ” ? ny mpitoraka bolongana maro Masedoniana tamin ’ ny alalan ’ ny Bulgariana iray Tale Adela Peeva izay ao amin ’ ny blaogin ’ izy ireo ihany ary nanomboka niresaka ity tantara ry zareo .
(src)="1.3"> Nalaina horonantsary io tahirim-pahalalana io ho fitarihan-kevitra ka ity talen ’ ny Adela Peeva ity no nahita izany nandritra ny fiara-misakafo hariva niaraka tamina namana ( Masedoniana , Serba , Grika , ary Tiorika ( Turk ) ) tao Istambul , ka tamin ’ izany no nilazan ’ izy rehetra hoe ny hira mandeha ao anatiny dia avy any amin ’ ny tanin ’ izy ireo .
(src)="5.1"> Ny Blaogy Arheo no namoaka ny sombiny tamin ’ ity tahiry ity voalohany .
(src)="6.1"> Na dia eo aza izany , tsy misy firehan-kevitra politika ny tahirin-tsary , mampiseho ny hitadiavanany maha izy azy sy ny hasosorana nasionaly ho an ’ ireo firenena avy ao Balkana ny fitadiavana ny maha izy azy asehon ’ ny hira .
(src)="6.2"> Ho solon ’ ny fifandraisana amin ’ izy ireo , eo amin ’ ny tsy fahafantaran-draharaha , dia voatery i Peevas tamin ’ ny fotoana sasantsasany no tsy maintsy miatrika ny fihetsem-pon ’ ireo olona nametraham-panontaniana milaza fa manohina ny fon ’ izy ireo izy.Raha niezakany hampifandray amin ’ ny lova kolotoraly ho an ’ ny Balkana amin ’ ny alalan ’ ny mozika amin ’ ity indray mitoraka ity I Adela Peeva dia nofehezina fa tsy mampino fa hoe amin ’ ny fomba ahoana ny hira iray tsy fantam-pihaviana no mahatonga fankahalana eo amin ’ ny vahoaka .
(src)="6.3"> Hita izany eny amin ’ ny faran ’ ny horonantsary , ka eo amin ’ ny fisehon ’ ny sary no miova ho tanimboly miroborobo ilay lapihazo ( Fiesta ) ary nanavotra “ olona avy amin ’ ny firazanana samihafa ” .
(src)="6.4"> Nitranga izany tao amin ’ ny sisin-tany anelanelan ’ ny Bulgaria sy Tiorkia .
(src)="6.5"> Na dia izany aza dia tahirim-pahalalana lehibe izy ity , nahaliana ahy ireo seho anankiroa voalaza ao anatin ’ ny horonantsary – “ hiran ’ ny ady ity ka ny rima / venty entiny dia avy any Eropa avaratra , satria tsy natao an ’ ny Balkana mihintsy izy ireo ” .
(src)="6.6"> Anjaranao no mamantatra hoe aiza izany hira izany .
(src)="6.7"> Rehefa nozaraina tao amin ’ ny tranok ’ ala Kajmak .ot ny bolongan ’ I Arheo dia maro ny fihetsika nivohitra :
(src)="8.1"> Tsy fantatro hoe fa maninona no misy ny fitongilanana mankany amin ’ ny fifandirana sy mankany amin 'ny firehan-kevitra nasionaly .
(src)="8.2"> Izay foana no toe-javatra misy ho an ’ I Balkana , satria mifandray tsy tapaka amin ’ ny tantara ny politikany .
(src)="8.3"> Mijoro aho : “ fa tsy misy firehan-kevitra politika izany mihintsy ilay tahirin-tsary ” , satria antony hafa no nanaovana izany .
(src)="8.4"> Angamba aloha tsy izany antony izany no nanamboarana azy tamin ’ ny voalohany , fa ny vokany kosa dia mitarika zavatra hafa tanteraka .
(src)="8.5"> Zavatra iray mety efa fahitantsika matetika izy ity rehefa misy ny fifangaroana eo amin ’ ny lova ara-kolotoraly sy ny zava-bita mahakasika ny firazanana sy ny sivilizasiona .
(src)="8.6"> Ny zava-drehetra ara-java-kanto izay misandrahaka , araka ny endriky fisehon ’ ny faritra dia mitarika firehan-kevitra politika mahaleo tena ( nationalisme ) ary ho eritreretina fa antony mahatonga ny resaka mirona any amin ’ ny politika izany .
(src)="10.1"> Eny , eny , vita tamin ’ ny endrika tsotra ilay izy mba hijevana ny tena maha izy azy ny hira .
(src)="10.2"> Izay no antony nilazany tamin ’ ireo Bosnianina fa ny Serba no manana ny raki-tsary fototra ( eny fa na dia tsy mbola tany Serba aza izy ) , lazainy fa an ’ I Serba izany rehefa Bosnianina no resahina , ary kosa rehefa Bolgarianina no resahina dia milaza izay fa ny Tiorka no manambara fa azy ireo io hira io .
(src)="11.1"> Tsy misy endrika fahatsorana ao anatin ’ ny tahirin-tsary … ary raha toa ka feno karazandrazan-javatra ao anatiny dia politika izany .
(src)="11.2"> Kanefa mety anie raha vita arak ’ izay koa izy e – mampiseho amin ’ ny fomba tsara ireto firenena ireto izany
(src)="11.3"> Namoaka ilay horonantsary ny mpitoraka bolongana Razvigor ary nanoratra izy :
(src)="12.1"> Ny mpilalao ao aminny horonantsary eo amin ’ ny sary misy an ’ I Albania dia milaza fa hiverina izy , ary nitranga tokoa izany tao amin ’ ny horonantsariny farany “ Divorce Albanian Style ” .
(src)="12.2"> Mety hita ao amin ’ ny aterneto ve io horonantsary io ?
(src)="12.3"> Ireo no zavatra nolazaiko rehefa nitady an ’ ilay Macedoniana antsoina hoe Michael Moore aho
(src)="1.1"> Arabia Saodita : Fahazoan-dalana hitoraka blaogy !
(src)="1.2"> Nahatonga resabe tamin 'ny vohikala sy blaogin 'ny media sosialy ny fanambarana farany nataon 'ny mpitondra-tenin 'ny Minisitry ny kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao Abdulrahman Al Hazzaa .
(src)="1.3"> Nilaza izany fanambaràna izany fa ireo mpamoaka ao amin 'ny vohikala sy media ao amin 'ny aterineton 'ny Arabia Saodita rehetra , anisan 'izany ireo blaogy sy sehatra fifanakalozan-kevitra , dia mila voarakitra ofisialy ao anatin 'ny lisitry ny Governemanta .
(src)="1.4"> Samy manohitra izany lalàna vaovao izany na ireo Saodiana na ireo tsy Saodiana .
(src)="1.5"> Ao amin 'ny Twitter , mivezivezy amin 'ny tenifototra # haza3 io fanoherana io - izay mitovy amin 'ny fanampin 'anarana ofisialin 'ilay minisitra .
(src)="2.1"> Ireto ambany ireto ny sasany amin 'ireo fanehoan-kevitra .
(src)="3.1"> Ao amin 'ny blaoginy Crossroads Arabia , faritan 'i John Burgess ho fanarahamaso ity fanapaha-kevitra ity :
(src)="3.2"> Taloha , afaka nandidy ny zavatra tenenin 'ny vahoaka sy henoiny amin 'ny media ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao .
(src)="3.3"> Raha ny tena izy dia azy daholo ny rehetra , raha tsy atao ara-bakiteny , dia amina fanaraha-maso henjana .
(src)="3.4"> Nampanano-sarotra izany fanaraha-maso izay nahakivy ny sasany izany ny media vaovao .
(src)="3.5"> Honena ny blaoginy i iamsoos ao amin 'ny Twitter-ny :
(src)="3.6"> Ry blaogy malalako , raiso ny fampiononako .
(src)="3.7"> Tsy nahazo alàlana ianao !
(src)="4.1"> Ireo hafa indray kosa dia nanapa-kevitra ny hanesoeso amin 'ity raharaha ity .
(src)="4.2"> Miteny i kabdu :
(src)="4.3"> Nanapa-kevitra ny hanangana ny blaogiko manokana ao amin 'ny aterineto aho , inona ireo fepetra ofisialy tokony ho fenoiko ?
(src)="5.1"> ary dia nanampy i Fouad Alfarhan :
(src)="5.2"> Ireo izay nandrakitra ny blaoginy sy ny mombamomba azy tao anatin 'ny lisitry ny Minisitry ny Fampahalalam-baovao araka izay noteneniny , dia tokony hitatitra ny fotoana fandroany any amin 'ny Minisiteran 'ny Rano ihany koa
(src)="6.1"> i Abdulaziz Fagih kosa dia nanolotra hevitra ho fanamborana lalàna vaovao :
(src)="6.2"> Ny tianay dia ny hamoahan 'ny Governemanta lalàna vaovao mba tsy ho afaka mandeha mankany amin 'ny trano fivoahana raha tsy mahazo alàlana ofisialy avy any amin 'ny fanjakana
(src)="7.1"> Nampisafoaka mpitoraka blaogy maro ihany koa ity fanambarana ity .
(src)="7.2"> Ao amin 'ny blaoginy , manontany ny fahalalahan 'ny vahoaka Saodiana miteny i Saudi Women ( Ireo vehivavy Saodiana ) :
(src)="7.3"> Tsy voafehy tsara ve ny fahalalahantsika ?
(src)="7.4"> Mila fahazoan-dàlana an-tsoratry ny mpiambina ahy ve aho vao afaka mikirakira ity blaogy ity ?
(src)="7.5"> Mila taratasin 'asa koa ve aho ?
(src)="7.6"> Tokony handalo amin 'ny Ministera ve aho alohan 'ny hamoahako zavatra ?
(src)="7.7"> Ahoana raha ho solon 'ny fitoraham-blaogy , manoratra zavatra tsy misy valaka amin 'izanyanaty Tweet mitohitohy na any amin 'ireo naoty Facebook ireo mpitoraka blaogy , inona no ho ataon 'izy ireo amin 'izany ?
(src)="7.8"> Tokony hanoratra ny kaonty Facebook sy Twitter-nay ihany koa ve izahay ?
(src)="7.9"> Toy izany koa , i Sultan Aljumairy dia maneho ny fahasahiranan-tsainy ao anatina lahatsoratra am-blaogy feno fahatezerana :
(src)="7.10"> Aiza amin 'ny tantara no tian 'izy ireo hamerenana antsika ?
(src)="7.11"> Na dia ny fanehoatsika izay ao ampontsika aza ankehitriny dia zavatra tafahoatra
(src)="8.1"> Vokatr " ireo resabe makadiry , nandà i Al-Hazzaa denied ny andro ampitson 'io fa tsy mila endrika taratasy fisoratana avy amin 'ireo mpitoraka blaogy na ireo mpitantana sehatra fiadian-kevitra .
(src)="8.2"> Nanampy ihany koa izy fa ny fampiharana ity lalàna ity dia natokana ho an 'ireo gazety amin 'ny aterineto .
(src)="8.3"> Nanambara ny Minisitera fa diso ny fandraisana ny zavatra voatenin 'ilay mpitondra tenin 'i Al Hazzaa .
(src)="9.1"> Nahatonga adihevitra mikasika ny media vaovao sy ny fiantraikany amin 'ireo mpitondra ity fandàvana ity .
(src)="10.1"> Manondro ny Twitter ho fitaovana mahery ankehitriny i Fawaz Saad :
(src)="10.2"> Mihemora haingana !
(src)="10.3"> Mampatahotra ny Twitter
(src)="11.1"> Fa ireo sasany kosa dia nanontany tena hoe maninona ilay fandàvana no avy any amin 'ny gazety vahiny .
(src)="12.1"> Miteny i Samar Almoossa :
(src)="12.2"> Taitra aho tamin 'ilay fandàvana avy any amin 'ny AFP , angaha isika tsy manana foibe mpampahalala vaovao eto an-toerana ?
(src)="12.3"> Sa hafatra iraisam-pirenena izay tsy misy hidirantsika vahoaka izany ?
(src)="13.1"> Farany , manome soso-kevitra amin 'ny tsy fahatomombanana eo amin 'ireo gazety ao amin 'ny aterineto i Alfarhan :
(src)="1.1"> Makedonia : Diabe Ho An 'ny Fandriampahalemana Nokarakaraina Hatao Ny Sabotsy 17 Martsa
(src)="1.2"> Nikarakara Diabe Ho An 'ny Fandriampahalemana tamin 'ity Sabotsy ( 17 Martsa ) ity ireo vahoaka avy amin 'ny foko maro ao Makedonia ho toy ny fanehoana ny ahiahin 'izy ireo fa hoe ireo heloka bevava atosiky ny fankahalàna tato ho ato dia fambara ratsin 'ny ady an-trano .
(src)="2.1"> Nomanina hatao ny Sabotsy 17 Martsa 2012 ao amin 'ny Kianja Malalaky ny tanàna ao Skopje amin 'ny 2 ora tolakandro ny Diabe , ary efa naely ny antso tamin 'ny alalan 'ity hetsika Facebook ity , hetsika Tweetvite , ny kaonty Twitter Zaedno za mir ( Mivondrona ho an 'ny Fandriampahalemana ) ary ny tenifototra # PEACEmk , # ZaednoZaMir , # zzm na # marshnamirot
(src)="3.1"> Ilay hetsika dia ireo mafàna fo sy fikambanana sivily manodidina ny 50 teo ho eo no nikarakara azy , nahitàna ny firotsahan 'ireo mpanakanto sy olo-malazan 'ny filazam-baovao avy amin 'ny foko samihafa ao an-toerana izay tsy maniry ny hahita ny hiverenan 'ny fifandonana nisy tamin 'ny 2001 ( fantatra ihany koa tamin 'ny hoe ny " antsasa-potoana faharoa " ) .
(src)="3.2"> Hoy izy ireo :
(src)="4.1"> Saribe 'ny Mivondrona ho an 'ny Fandriampahalemana .
(src)="5.1"> Izahay dia :
(src)="6.1"> MANKAMAMY fandriampahalemana !
(src)="7.1"> MANKAMAMY fiaraha-miaina fa tsy fitsitokotokoana !
(src)="8.1"> MANKAMAMY fampitoniana ny fifanenjanana !
(src)="9.1"> MANKAMAMY ny tsara amin 'ny olon-drehetra !
(src)="10.1"> MANKAMAMY Finamànana !
(src)="11.1"> MANKAMAMY Fiarahamonina lavitry ny herisetra !
(src)="12.1"> Tsy misy fanohintohinana ny zo sy fanodinkodinan-tsaina !
(src)="13.1"> Raisinay an-tanan-droa ireo rehetra izay mitolona ho fampihenana ny fifanenjanana sy manangana fanairana mba hiainan 'ny rehetra miaraka !
(src)="14.1"> Ity dia olana iray amin 'ny fahatsiarovantena amin 'ny maha-olom-pirenena sy ny maha-olona .
(src)="15.1"> Ndeha isika hamboly ny voan 'ny fitiavana .
(src)="16.1"> Irintsika izany ary azontsika atao !
(src)="16.2"> Ilay Diabe dia ho setrin 'ireo fivoaran 'ny andianà herisetra nitohitohy teo amin 'ireo foko , tafiditra amin 'izany koa ny fandraisana andraikitra milona be sy mampanontany tena ny maro ataon 'ny manampahefana mikasika ny famonoana an 'i Gostivar taoriana / nandritra ny fifamaliana mikasika resaka toerana hametrahana fiara tamin 'ny 28 Febroary , ireo hetsi-panoherana taorian 'ny fandevenana ary ny fitoraham-bato ireo toeram-pivarotana , narahana andiana herisetra nahitàna fanafihana miendrika " valifaty " " tampoka " - fidarohana ireo mpandalo teny an-dàlana taminà tanàna Makedoniana maro sy tany anaty fitateram-bahoaka tao Skopje , nahatonga faharatràna mafy ho an 'olona efa ho am-polony .
(src)="17.1"> Izany rehetra izany dia nitanila avokoa ny fomba nitateran 'ny fampahalalam-baovao azy , tonga hatramin 'ny kabary feno fankahalàna ankarihary any anatin 'ireo media ara-barotra mitsinjarazara ara-poko / ara-piteny izay mbola amperin 'asa .
(src)="17.2"> Ny vanim-potoana niharatsian 'ny toe-draharaha ara-pandriampahalemana tao Makedonia dia nanomboka tamin 'ny faramparan 'ny Janoary , ary nialohavan 'ny hetsika nasionalista efa nanaovana ezaka elabe avy amin 'ny foko eo amin 'ny fitondrana ao Makedonia , sy ny antokon 'ireo foko avy any Albania teo anivon 'ny vondron-dry zareo " manokana " , ary ny rafit-pitsarana " nentin-drazany " momba ny tsimatimanota na ny famelan-keloka omena ireo nahavanon-doza tsy nahy noho ny heloka bevava natosiky ny fankahalàna .
(src)="17.3"> ( Ny fomba fteny hoe heloka natosiky ny fankahalàna dia tsy misy araka izay famaritana izay ao anatin 'ny rafitry ny lalàna Makedoniana , na dia hoe aza raisina ho heloka goavana ny fihaikàna fankahalàna ara-poko sy ara-piaviana .
(trg)="18.4"> ( Bu gelenek Ingiliz nefret ceza sistemine , nefret ve suç olarak nitelendirilmiştir .
(trg)="18.5"> Fakat Makedonya sisteminde bu nitelendirme yapılmamıştır .
(src)="18.1"> Sary lehibe momba ny Diabe Ho an 'ny Fandriampahalemana avy amin 'i Nebojsha Galevski - Bane .
(src)="19.1"> Ireo mpandray anjara amin 'ity hetsika ity dia samy naneho ny faniriany hiara-hiaina amin 'ireo olona mitovy aminy avy amin 'ny foko samihafa amin 'ny alàlan 'ny fanolorana dikanteny samihafa avy amin 'ilay antso , ary koa amin 'ny famokarana zavatra isan-karazany maro samihafa .
(src)="19.2"> Ohatra , ilay mpanome endrika , Nebojsha Gelevski-Bane , dia namorona ilay saribe etsy ambony , ary ilay talem-pamokarana sarimihetsika , sy seho an-tsehatra , Srđan Janićijević , dia nampakatra sary iray hafa manohana ny hisian 'ny fandriampahalemana , ary lahatsary iray fanaovana dokambarota .
(src)="1.1"> Tontolo Arabo : Ireo Teknolojia Niasa Nandritra Ny Fotoanan 'ny Revolisiona
(src)="1.2"> Efa niteraka adihevitra ny fanovana nentin 'ny fifampitam-baovaon 'olo-tsotra sy ny teknolojian 'ny finday teo amin 'ny fitroarana Arabo .
(src)="1.3"> Na inona na inona anefa ny fehin-kevitra avy aminao , azo heverina tokoa fa nampiasa ireo taranjan-teknolojia vaovao ireo ny mpikatroka ary hitarataratra ny sasantsasany amin 'izy ireny isika amin 'ity lahatsoratra ity .
(src)="2.1"> Mitatitra ny fisamborana anao
(src)="3.1"> Maro ny bilogera sy mpikatroka no nosamborina hatramin 'ny nanombohan 'ny fitroarana arabo .
(src)="3.2"> Ireto avy ny voasambotra tany Syria tao anatin 'ny volana vitsy dia vitsy fotsiny : Rima Dali , Safana Baqleh , Ali Mahmoud Othman , Razan Ghazzawi .
(src)="3.3"> Ny sombiny amin 'ireo nosamborina tany Ejipta ry Maikel Nabil Sanad , Alaa Abd El Fattah ary Amr Gharbeya .
(src)="3.4"> Efa tsy lazaina intsony ireo avy any amin 'ny firenena tahaka an 'i Tonizia sy Bahrain , sy ireo bilaogera na mpikatroka tsy navela hiditra tany Ejipta sy notazonina hatao fanadihadiana tao amin 'ny seranam-piaramanidin 'i Ejipta .
(src)="4.1"> Noafahana ny sasantsasany amin 'ny bilaogera sy ny mpikatroka taoriana , tsy nanampotoana nilazana izay nitranga tamin 'ny mpisolovava sy ny fianakaviana anefa ry zareo tamin 'ny fotoana nisamborana azy .
(src)="4.2"> Ka eo no manana anjara toerana ny teknolojia .